Olee otú iji tọghata WLMP faịlụ ka AVI ọsọ ọsọ na mfe
Olee otú iji tọghata WLMP faịlụ ka AVI
A WLMP faịlụ bụ a nkiri oru ngo faịlụ site Microsoft omume Windows Live Movie kere ya. WLMP faịlụ kere Windows Live Movie Onye kere na-emekarị exported ka WMV format faịlụ ozugbo na a usoro. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ chọrọ ha WLMP faịlụ azọpụta AVI format ọzọ karịa WMV format, n'ihi na AVI nwere ike nakweere ebe site na ọtụtụ ike ngwaọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ ngwa wdg Ma Windows Live Movie Onye kere apụghị ime nke a. Nanị ihe ngwọta bụ iji WLMP ka AVI Ntụgharị iji tọghata WLMP ka AVI n'ihi na obosara ojiji.
Part 1: Best WLMP ka AVI Ntụgharị
Part 2: Free WLMP ka AVI Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online WLMP ka AVI Ntụgharị
Nkebi nke 1: Nweta Best & Professional WLMP ka AVI Ntụgharị
Professional video Ntụgharị: tọghata WLMP faịlụ ka AVI faịlụ ngwa ngwa, na-adị mfe, na elu mma.
Otutu Devices atọrọ atọ: tọghata WLMP faịlụ ka ọtụtụ ngwaọrụ, sịnụ, Blackberry, PSP, Xbox 360 na na.
Hazie Ntọala: Ịgbanwe video codec, mkpebi, bit ọnụego, wdg ozugbo na ngwa a.
Kasị Nchigharị Speed: Ị nwere ike a 30X kasị akakabarede ọsọ karịa ndị ọzọ na asọmpi.
Othere Akụkụ: Ọ na-ahapụ gị dezie videos, download videos na ọbụna ọkụ video ka DVD.
Olee otú iji tọghata WLMP ka AVI
1. Save WLMP faịlụ dị ka WMV video faịlụ
Dị ka anyị maara, WLMP bụghị a video usoro. Otú ị chọrọ mbupụ faịlụ ka WMV video faịlụ. Ẹkedori Windows Live Movie Onye kere, wee pịa "File Open oru ngo" na-emeghe otu nke gị Obodo WLMP faịlụ. Pịa "Njikwa" ọzọ, mgbe ahụ, na-aga "Save nkiri"> "Standard-definition". Ugbu a, ị na-na na-azọpụta gị WLMP faịlụ dị ka a WMV video faịlụ. Na-esote, ị nwere ike iji nke a oké video Ntụgharị iji tọghata ndị a faịlụ ka AVI usoro.
2. Import WMV video faịlụ ka a WLMP ka AVI video Ntụgharị
Mgbe ị na-agba ọsọ a smart video Ntụgharị, ị ga-ahụ ya "tọghata" interface dị ka ndị a. Ị na-ahụ a bọtịnụ na elu-n'akụkụ aka ekpe nke interface? Dị nnọọ pịa ya mbubata WMV faịlụ zọpụta ke nzọụkwụ 1 a usoro maka video akakabarede.
3. Họrọ AVI dị ka mmepụta format
N'akụkụ aka nri nke interface, e nwere ihe mmepụta Format panel. Ị ma pịa format image e nwere ma ọ kụrụ ndọpụta bọtịnụ n'elu-emeghe a ngwa si mmepụta format ndepụta. Na, na, na mmapụta mmepụta format window, ị nwere ike họrọ "Format"> "Video"> "AVI". Site n'ụzọ, ọ bụrụ nnọọ na chọrọ igwu WLMP faịlụ na ụfọdụ ngwaọrụ, ị nwere ike na-aga "Ngwaọrụ" Atiya ịhọrọ gị na-achọsi ike ngwaọrụ.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụfọdụ video kwa ka video codec, mkpebi, bit ọnụego, wdg, pịa Ntọala nhọrọ na ala nke mmepụta Format panel. E nwere, ị nwere ike nweta ihe metụtara nhọrọ.
4. tọghata WLMP faịlụ ka AVI faịlụ
Nanị see "tọghata" button na ala-nri akuku nke a WLMP ka AVI video Ntụgharị 's isi interface. Ọ gwụla. A ngwa ga-amalite iji tọghata gị faịlụ ka AVI faịlụ ozugbo.
The video akakabarede ga-agwụ agwụ na nkeji. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ngwa ngwa emi odude na converted AVI faịlụ site ọkụkụ "Open nchekwa" button na ala nke isi interface. Ugbu a, dị nnọọ enwe gị AVI faịlụ. Ọ bụrụ na ị mkpa itinye mmepụta faịlụ na ngwaọrụ gị, dị nnọọ nyefee ha ka ha na ngwaọrụ site na USB.
Nkebi nke 2: FreeWLMP ka AVI Ntụgharị
# 1. Free WLMP ka AVI Ntụgharị: Wondershare Video Converter Free
Nke a bụ kpam kpam a free WLMP ka AVI Ntụgharị. Na ị bụghị nanị nwere ike iji ya iji tọghata vidiyo na ọ bụla usoro, download vidiyo si na YouTube na ọbụna dezie vidiyo site trimming, cropping, na-agbakwunye sobtaitel na ndị ọzọ.
Pro: 100% free WLMP ka AVI Ntụgharị
1. Ọ na-ahapụ gị tọghata nkịtị videos. Ị nwere ike iji ya iji tọghata 3D na HD videos.
2. Ị nwere ike 30X kasị convertsion ọsọ maka dị nnọọ 10 ugboro.
3. Ị nwere ike kpọmkwem tọghata videos gị iOS na Android ngwaọrụ.
Olee otú iji tọghata Windows Movie Onye kere faịlụ ka AVI
Olee otú iji tọghata WLMP faịlụ ka MP4
Olee otú iji tọghata Windows Movie Onye kere faịlụ ka MP4
Olee otú SPLIT / Kpaa / Cut VOB Files
Olee otú igwu egwu AVCHD on PS3?
Idozi Ò Kwekọrọ n'Ozizi Nsogbu maka MTS Files
Olee otú Tinye SRT ka MP4 (Windows 10 gụnyere)
Olee otú Play VIDEO_TS faịlụ
Olee otú Ọkụ Spotify ka CD
Olee otú Ọkụ iTunes Movies ka DVD na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata WLMP faịlụ ka AVI